Badhasaabka Gobolka Hawd Oo Dhagax dhigay Saldhig Boolis oo laga hirgelinayo Degmada Sayla-bari | Somaliland.Org
October 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Gudoomiyaha gobolka Hawd Jamaal Xuseen Hurre oo ay weheliyaan hogaanka dhismaha ee Ciidanka Booliska Daahir Cali Wacays iyo Xoghayaha fulinta ee gobolkaasi ayaa maanta ka qeyb galay xaflad loo sameeyay dhagax dhiga dhismaha saldhiga booliska ee Degmada Sayla bari.
Siday Faafisay Wakaalada wararka ee SOLNA ee ay maamusho dawladdu oo aanu warkan ka soo xiganay waxa wajiga koowaad ee dhismaha saldhigan lagu fulinayaa qaadhaan laga soo ururiyay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi oo baahi weyn u qabta Saldhig.
Gudoomiyaha gobolka hawd Jamaal Xuseen Hure oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay iskaashiga ay bulshadu ku samaysanayso saldhigan oo wax badan ka tari doona arrimaha nabadgalyada ,
Waxaanu sheegay inay maamul gobol ahaan ka hawl gelayaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhismaha saldhigan, waxaanu si weyn ugu mahad celiyay dadkii u hawl galay dhismihiisa.
Sidoo kale Hoggaanka dhismaha ee Ciidanka Booliska Daahir Cali Wacays ayaa sheegay in dedaalka ay dadweynaha degmada Sayla bari ay sameeyeen ay ka turjumayso sidii shacbigu u fahmeen ahmiyada ilaaalinta nabadgelyadu ay u leedahay bulsho-weynta waxaanu tilmaamay inay arrintaasi tusaale u tahay sida dadweynaha Somaliland ugu bislaaday nabadgelyada.
Previous PostShirkii Golaha dhexe ee xisbiga UDUB iyo catowgii Hoggaankii XisbigaasNext PostWasiirka Warfaafinta oo Tababar xirfadeed u furay Suxufiyiinta warbaahinta dawladda	Blog